U ballansashada safarka Hawaii hadda waa go'aan nolol iyo geeri
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » U ballansashada safarka Hawaii hadda waa go'aan nolol iyo geeri
Airlines • Airport • Aviation • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Technology • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Huteelada, meelaha soo jiidashada leh, gaadiidka, dukaamada, iyo maqaayadaha ayaa u dagaalamayey sidii dib loogu furi lahaa ganacsiga Gobolka Hawaii. Shirkadaha duulimaadku waxay ku darayeen goobo cusub oo dalxiiska ilaha dalxiiska Aloha Gobolka. Ganacsigu wuu fiican yahay - laakiin kani ma hawlgal ismiidaamin ah baa?
Doorashooyin ayaa soo socda. Ma jiro qof ka tirsan Gobolka oo ku dhiiran inuu soo jeediyo oo hirgeliyo xannibaadaha sida xun loogu baahan yahay si loo fududeeyo socdaalka nabdoon ee Hawaii mar kale.
Waa maxay qayb ka mid ah Hawaii oo aan ammaan ahayn in la booqdo hadda socdaalayaashu ma fahmaan?
Waa maxay qayb ka mid ah “Hawaii ammaan uma aha martida”Dalxiisayaashu miyaanay fahmin marka ay xeebaha Hawaii ku buuxinayaan shukumaan ku xiga shukumaanno, taasoo ka dhigaysa kala fogeynta bulshada mid aan macquul ahayn?
Waa maxay qaybta "Hawaii ammaan uma aha martida ” miyaanay helin marka khadadka saacad-dheer ee maqaayadaha ah ay caadi yihiin?
Waa maxay qaybta "Hawaii ma aha ammaan booqdayaasha ” lama fahmin marka dalxiisayaasha aan la soo dhaweyn, isbitaallada ayaa ku shaqeeya 125% awood, iyo caan Aloha Ruux ayaa la waayay?
Dalxiiska ayaa weli ku sii qulqulaya Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, iyo Jasiiradda Weyn ee Hawaii, in kasta oo Guddoomiyaha Gobolka Hawaii Ige, Lt. Governor Green, madaxa CDC, iyo John De Fries, CEO of the Maamulka Dalxiiska ee Hawaii, waxay ka codsanayaan booqdayaasha inaysan u safrin Aloha Sheeg waqtigaan.
Farriinta cad ee dadka deegaanka iyo booqdayaasha labadaba waa “Safar Muhiim ah oo keliya!”
The heerka dhimashada maanta iwaa tii ugu sarreysay ee laga diiwaan geliyo Hawaii intii lagu jiray xiisadda COVID-19.
Kiisaska Coranavirus ee Hawaii
Bishii Ogosto 24, 2020, Gobolka Hawaii wuxuu diiwaangeliyay 169 kiis oo COVID-19 oo cusub hal maalin, taasoo dhalisay xannibaadyo iyo qufullo adag.
Bishii Ogosto 25, 2021, Gobolka Hawaii wuxuu diiwaangeliyay 625 kiis oo cusub oo ah COVID-19 hal maalin gudaheed. Kaliya waxoogaa xannibaadyo ah oo yar oo aan lahayn qufullo ayaa jira.
Dhimashada COVID-19 ee Hawaii
Ogosto 24, 2020, qofna kuma dhiman Hawaii COVID-19. Tani waxay ahayd markii ugu sarraysay masiibada.
Bishii Ogosto 25, 2021, 8 qof ayaa ku dhintey COVID-19 gudaha Hawaii, waana tiradii ugu badneyd ee la diiwaan geliyo hal maalin tan iyo markii uu dillaacay masiibada.
Imaanshaha Gaadiidka Cirka
Bishii Ogosto 23, 2019, 21,475 qof ayaa garoomada diyaaradaha ee Hawaii ka soo degay Goobaha Gudaha ee Mareykanka.
Bishii Ogosto 23, 2020, tirada imaanshaha ayaa hoos ugu dhacday 1,700. Cidna lama tallaalin.
Bishii Ogosto 23, 2021, wadar rikoor ah oo dhan 23,548 socotada ah ayaa ka soo degay garoomada diyaaradaha ee Hawaii oo ka yimid 49 -ka gobol ee Mareykanka.
Kuwa la tiriyey ayaa ah rakaab gudaha ah oo ka gudba Baasifigga oo ka yimid Mareykanka intiisa kale oo yimid Honolulu, Kahului, Lihue, Hilo, iyo Kona.
Bishii Ogosto 2020 qofna lama tallaalin.
Bishii Ogosto 2021 in ka badan 70% Hawaii ayaa heshay ugu yaraan hal qiyaas Tallaal.
Sida laga soo xigtay Lt. Governor Green, tHeerka deggenaanshaha isbitaalka ee Gobolka Hawaii hadda waa 125%. Dadka wadne -istaagga iyo cudurrada kale ee halista ah mar dambe ma heli karaan ICU -yada sababta oo ah tirada bukaannada Coronavirus oo aad u badan.
Hawaii way xanuunsan tahay. Hawaii way ka jirran tahay waddamada sida Bahamas tusaale ahaan ka hooseeya digniinta socdaalka Tier 4 ee Mareykanka oo leh:
HA KU SOCOTIN WAQTIGAN !
Booqdayaashu waa inay muujiyaan qaar ALOHA dadka reer Hawaii oo guriga joog.
Dalxiisku waa isha kaliya ee ugu weyn ee raasamaalka gaarka ah loogu talagalay Dhaqaalaha Hawai'i. Sannadka 2019, dhaqaalaha dalxiiska ee Hawai'i wuxuu diiwaangeliyey:
Dakhliga Canshuurta Gobolka: $ 2.07 bilyan (+1.4%,+$ 28.5 milyan YOY marka loo eego 2018).
Soo -booqdaha Imaanaya 2019: 10,424,995.
Guuleystaha cad wuxuu u muuqdaa inuu yahay dhaqaalaha dalxiiska ee Hawaii. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay waxa mudaaharaadayaasha ka-hortagga tallaalka ay maanka ku hayaan marka ay ku hor mudaaharaadaan guriga Lt. Governor Green.
Ogosto 25, 2021 markay tahay 14:55
Ujeeddadu waa: Isbitaalladeenna waxay ku shaqeeyaan 125% awood oo aan lahayn sariiro ICU. Runtii wax farqi ah kuma lahan cidda virus -ka keenaysa Gobolkeena. Waxay ahayd inaynu doodan hore u yeelanno.
Stuart wuxuu leeyahay,
Ogosto 25, 2021 markay tahay 13:56
Haddii aad qori doonto cinwaan barar guji oo sidan oo kale ah ugu yaraan sax naxwe ahaan! In kasta oo tirakoobku sax yahay haddana waxaa jira eber caddayn ah in dalxiiska uusan wax xiriir ah la lahayn faafinta halkan.